Qubanaha » Itoobiya oo saami dhaqaale ku leh Dakadda Berbera.
Itoobiya oo saami dhaqaale ku leh Dakadda Berbera.
Somaliland, ayaa sheegtay dowladda Itoobiya inay saami dhaqaale ku leedahay Dakadda Magaalada Berbera oo si buuxda loogu wareejiyay Shirkadda DP World ee laga leeyahay dalka Isu taga Imaaraadka Carabta, taasi oo dhisme iyo ballaarin ku sameyn doonta Dakadda.
Xuseen Aadan Cige (Dayr) Afhayeenka Xukuumadda Somaliland oo Warbaahinta kula hadlay Madaxtooyada Magaalada Hargaysa, ayaa sheegay in Dowladda Itoobiya saami dhaqaale ay ku leedahay Dakadda.
Wuxuu sheegay saamigaasi oo gaaraya 19% inay siisay Shirkada DP World, balse aanu aheyn mid ay bixisay Xukuumadda Somaliland, wuxuuna sheegay Somaliland saamiga kaga soo aadayay Dakadda Berbera oo ah 35% uu yahay sidiisi.
“Itoobiya saxiixa waxba kuma lahan dakadda waxaa kireeyay Somaliland, Kiraystuhuna waa Shirkada DP World la dhaho, 19% waxaa siisay DP World Dowladda Somaliland 35% aynu laheyn waxba kama go’in.” Ayuu yiri Afhayeenka Madaxtooyadda Somaliland.
Somaliland ayaa sheegtay in dowladda Itoobiya wax saxiix ah aysan ku laheyn Dakadda Magaalada Berbera, balse saxiixyada ay dhexmareen Somaliland iyo Shirkada DP World oo hadda gacanta ku haysa Dakadda Magaalada Berbera.
Anfacaada ku jirta heshiiska dhexmaray DP World iyo Somaliland, ayaa ah in Dakadda Magaalada Berbera lagu sameyn doono dib u dhis iyo tayeyn casri ah.